अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति १३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०५:५३
१९ अर्थात कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास बढेपछि मास्क प्रयोग पनि बढेको छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी सबैले मास्क प्रयोग गरेर नै बिरामीको जाँच गर्छन् । किनकी मास्कले रोग सर्नबाट रोक्न सक्छ । अस्पतालमा मात्र होइन, धूलो–धुवाबाट बच्न पनि मास्कको प्रयोग गर्ने गरिन्छन् । काठमाडौं जस्तो धुलो धुवा भएको शहरमा मास्क विना हिड्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर कतिपय नेपालीले मास्कलाई सहि प्रयोग गर्न जानेका हुँदैनन् । सहि तरिकाले मास्क प्रयोग गर्न नजानेमा त्यसको उपयोगिताको अर्थ रहदैन । जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र समिरका अनुसार मास्क प्रयोग गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
सहि तरिकाले मास्क प्रयोग गर्न नजानेमा मास्कले हानिकारक धुलोको साना कर्णहरु शरीरमा पस्नबाट रोक्न नसक्ने डा समिर बताउछन् । त्यतिमात्र होइन सहि तरिकाले मास्क प्रयोग नगरेमा त्यसले मुखको संक्रमण हुने जोखिम समेत हुन्छ ।
डा समिरका अनुसार मास्क प्रयोग गर्दा यी कुरमा ध्यान दिनुस्ः
४. सकभर एन ढछ मास्क प्रयोग गर्ने
५. मेडिकल र सर्जिकल मास्क ‘ युज एन थ्रो ‘ अर्थात डिस्पोजेबल हुन् तसर्थ नयाँ मास्क एकपटक मात्र प्रयोग गर्ने अनि उचित ठाउँमा फ्याँक्ने
१०. कपडाको मास्क सकभर प्रयोग नगर्ने , धोएको कपडाको मास्क प्रयोग गर्दा साना कण, भाइरस र ब्याक्टेरिया फिल्टर हुँदैनन्